Madaxweynaha oo daah furay mashruuca Nadaafada casriga ah ee Gobolka Banaadir | HEEGAN
Madaxweynaha oo daah furay mashruuca Nadaafada casriga ah ee Gobolka Banaadir
Madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta ka qeyb galay furitaanka Mashruuca Nadaafadda Gobolka Banaadir oo ay iska kaashadeen Maamulka Gobolka Banaadir iyo Shirkad Maxali ah oo lagu magacaabo ECCO.
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir, ganacsato iyo marti sharaf kale. Guddoomiyaha Gobolka Banaadir oo ka hadlay furitaanka mashruucaan ayaa sheegay in dadaal badan ka dib lagu guulestay in mashruucan laga hirgeliyo Soomaaliya, oo ay in ka badan 1000 qofood shaqo abuur u noqoneyso. Waa mashruuc casri ah sida aad u jeedaan qalabka la soo bandhigay, kuwaas oo nadaafada caasimada kaalin mug leh ka qaadan doona, soona celin doona bilicda caasimada.
Ugu dambeyntii Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa ugu baaqay ganacsatada iyo Qurbojoogta Soomaaliyeed inay dalkooda maalgeshtaan tanoo fursad u ah in dhalinyaradeena aan shaqo u abuurno. Dowladda Federaalka waxaa ka go’an inay ahmiyad gaar ah siiso maalgeshiga ganacsatada si dhalinteenu ay shaqo u helaan, dalkana uu uga baxo saboolnimada iyo inaan gaarno isku filaasho buuxda oo dhanka dhaqaalaha ah.